သင့်ကိုယ်ပိုင်တိုတိုဆံပင်ဖြတ်နည်း - အဆင့် ၄ လမ်းညွှန် - ဂျပန်ကတ်ကြေး
သင့်ကိုယ်ပိုင်တိုတိုဆံပင်ကိုဖြတ်တောက်နည်း - အဆင့် ၄ လမ်းညွှန်
ဂျိမ်းအဒမ်အားဖြင့်ဖြစ်သည် နိုဝင်ဘာလ 08, 2020 ဖတ်ပြီးသားမိ 4
သင်သည်သင်၏အိမ်တွင်သင်၏ဆံပင်တိုတိုကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ ဝါသနာကိုရွေးချယ်ရန်သို့မဟုတ် ၂၀၂၀ ၏သီးသန့်ထားရှိခြင်းမှသင်ယူသည်ဖြစ်စေ၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်တိုတောင်းသောဆံပင်ကိုမည်သို့ဖြတ်ရမည်ကိုမသိမီသင်အမြန်လမ်းညွှန်သာလိုအပ်သည်။
ဤဆောင်းပါး၌၊ မင်းဘာလိုအပ်လဲ နှင့် ဆံပင်တိုတိုဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲ အိမ်မှာ။
ကျွန်ုပ်တို့မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအနက်တစ်ခုမှာ“ ကျွန်ုပ်၏အိမ်တွင်ဆံပင်ကိုအဘယ်သို့ဖြတ်ရမည်နည်း” ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဆံပင်တိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားနိုင်သော်လည်းအလွန်တိုသောဆံပင်ညှပ်တွင်အဓိကပါဝင်သည့်အရာမှာချွန်ထက်သောကပ်ကြေးတစ်စုံဖြစ်သည်။
လှမ်း 1. သင့်ဆံပင်စို
ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းကသင်၏ဆံပင်ကိုစိုစေခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။ သင်၏ဆံပင်ကိုရေချိုးသို့မဟုတ်နစ်မြုပ်စေခြင်း၊ ထို့နောက်အနည်းငယ်ခြောက်သွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏တိုသောဆံပင်တိုစေခြင်းငှါရေမှုန်ရေမွှားပုလင်းကိုသုံးနိုင်သည်။
ဆံပင်တိုတိုမဖြတ်ခင်သင်ဘာကြောင့်စိုစွတ်တဲ့ဆံပင်ရှိဖို့လိုသလဲ။ ၎င်းသည်ဖြတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်၊ အမှားများပြုလုပ်ရန်လည်းခက်ခဲသည်။
လှမ်း 2. ထိပ်မှာဖြတ်တောက်စတင်ပါ
ဆံပင်ညှပ်ဆံတိုအများစုအတွက်၊ သင်၏ခေါင်းထိပ်တွင်နောက်ဖက်သို့မဟုတ်နှစ်ဖက်ထက်ဆံပင်ရှည်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံသည်ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။
နားရဲ့အောက်နားကအရှည်ပိုတိုတယ်။ ဆံပင်တိုတိုဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သည့်အရာအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းနေသောကြောင့်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
၁.၂ လက်မ (၂.၅ စင်တီမီတာမှ ၅ စင်တီမီတာ) ရှိသည့်သင်တုန်းညှပ်တစ်ချောင်းကိုသင်ဆံပင်ဖြတ်ရန်လိုသောအချိန်တိုတိုပေါ် မူတည်၍ ရိုက်ပါ။
၂။ သင်ရွေးချယ်ထားသောကလစ်ဖြင့်သင်တုန်းကိုဖွင့်ပါ။ သငျသညျအထက်သို့လှုပ်ရှားမှုလုပ်လိမ့်မည်, ဒါကြောင့်သင်တုန်းမျက်နှာကျက်ဆီသို့ညွှန်ပြ။ နားရွက်အထက်မှတက်ပြီးတက်ပါ။ ကျောနောက်သို့လမ်းတစ်လျှောက်မင်း၏ဘေးထွက်ကိုလိုက်နာပါ။
3. သင်၏ ဦး ခေါင်း၏အခြားဘက်ခြမ်းကိုထပ်တူပြုပါ၊ နားအထက်မှစတင်ပြီးနောက်ကျောဘက်သို့သွားပါ။ သင်၏ခေါင်းနောက်ဘက်ရှိအစက်အပြောက်များကိုမလွတ်မြောက်စေရန်သေချာစေပါ။
သင်၏နဖူးမှ စတင်၍ သင်တုန်းကိုရွှေ့ခြင်းဖြင့်ရှေ့တွင်အလားတူလုပ်ဆောင်ပါ။ သင်၏အကြံအစည်သည်သင်၏ခေါင်း၏သဘာဝအကွေးတစ်လျှောက်သင်တုန်းကိုရွှေ့ရန်ဖြစ်သည်။
၅။ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအကဲဖြတ်ပါ။ ရှေ့၊ ဘေး၊ နောက်ဘက်ရှိအစက်အပြောက်များကိုသင်မလွတ်သွားစေရန်သေချာပါစေ။
လှမ်း 3. အောက်ပိုင်းနှစ်ဖက်ဖြတ်ပြီး
သင့်ခေါင်း၏အောက်ပိုင်းနှင့်နောက်ကျောများအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်တိုတောင်းသောဖြတ်တောက်မှုကိုလိုချင်သည်။ အဆင့် (၂) အတွက်ရွေးချယ်ထားသည့်သင်တုန်းကလစ်ထက်သေးငယ်သည့်အရွယ်အစားတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင့်တွင် ၂ လက်မ (၅ စင်တီမီတာ) ကလစ်တစ်ခုရှိပါကသင်သည်အတိုနှစ်ဖက်စလုံးအတွက် ၁ လက်မ (၂.၅ စင်တီမီတာ) ကလစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
၁။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်စတင်ပါ။ တူညီသောအနိမ့်သို့အထက်သို့ရွေ့လျားမှုကိုပြုလုပ်ပါ။ ဆံပင်ရှည်၊ နားနားလိုင်းသို့ရောက်သောအခါရပ်ပါ။
၂။ သင်၏လည်ပင်းမှ စတင်၍ သင်တုန်းကိုတဖြည်းဖြည်းရွေ့သွားခြင်းဖြင့်သင်၏ ဦး ခေါင်းနောက်ကျောတွင်ဆက်လုပ်ပါ။ နားရွက်လိုင်းအထက်ရှိဆံပင်ရှည်သည့်နေရာကို ထပ်မံ၍ ရပ်ပါ။
3. သင်၏နားလိုင်းအထက်ရှိဆံပင်နှင့်အောက်ရှိဆံပင်အကြားအနည်းငယ်ကွာခြားမှုရှိနိုင်သည်။ ၎င်းကိုကတ်ကြေးများကို သုံး၍ ပြုပြင်နိုင်သည်
အဆင့် ၄။ ကွဲပြားခြားနားသောဆံပင်အရှည်နှစ်ခုကိုကတ်ကြေးနှင့်ရောစပ်ပါ
ပြီးပြည့်စုံသောဆံပင်ညှပ်ဆံပင်၏နောက်တစ်ဆင့်မှာကွဲပြားခြားနားသောဆံပင်အရှည်နှစ်ခုကိုကတ်ကြေးဖြင့်ရောစပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာ၊ သင့်ခေါင်းခေါင်းပတ်ပတ်လည်မှာ၊ အထက်ပိုင်းပိုရှည်တဲ့နေရာ၊ အထက်ပိုင်းနားမှာအမြင့်ရှိသင့်ပြီးအောက်ပိုင်းကပိုတိုတယ်။ ဒါကငါတို့ရောနှောချင်သောအရာဖြစ်တယ်။
သင့်ရဲ့ Non-do ယူခြင်းminaလက်, သင့်ဆံပင်ရှည်ရှည်အပိုင်းဖမ်းရန်သင်၏အလယ်တန်းနှင့်အညွှန်းကိန်းလက်ချောင်းများကိုသုံးပါ။ ဒီဟာတိုတောင်းတဲ့ဆံပင်ထက်များတယ်။
ဆံပင်ကတ်ကြေးကို အသုံးပြု၍ ရှည်သောဆံပင်အပိုင်း၊ အတိုတိုဆံပင်နှင့်ရှည်သောဆံပင်အရှည်များကိုချုံ့ပါ။ ၎င်းသည်ဒေသနှစ်ခုကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဆံပင်တိုနှင့်ဆံပင်တိုတိုများထွက်လာသောနေရာတွင်သင်၏ခေါင်းကိုပတ်။ ဤလုပ်ငန်းကိုဆက်လုပ်ပါ။ ဆံပင်တိုနှင့်ဆံပင်ရှည်များအကြားရှိမျဉ်းကြောင်းသည်သင်၏ ဦး ခေါင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်ရောနှောထားသောနေရာတွင်ရလဒ်ဖြစ်သင့်သည်။
မိမိကိုယ်ကိုဆံပင်ညှပ်ခြင်း၏အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းမှာ blending section; ဘယ်မှာသင်ကတ်ကြေးတစ်စုံကိုယူပြီးဆံပင်အရှည်ရှည်နှင့်အတူတကွရောနှောနေမည်နည်း။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆံပင်တိုတိုကိုဖြတ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာမှန်၊ ကတ်ကြေးတစ်စုံနှင့်သင်တုန်းတိုနှင့်အတူဖြစ်သည်။ ကြီးလေးသောအမှားများကိုပြုပြင်ရန်သင့်တွင်ဆံပင်မလုံလောက်သဖြင့်သင်၏ဆံပင်ကိုဖြတ်တောက်ချိန်တွင်အချိန်ယူပါ။